Wasiirka Maaliyaddu Dheg Uma Dhigi Doono Dhaleecaynta Dhaameel-quuteyaasha
(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 13, 2018 08:40:04
Masuulkani wakhti gu’yaal ah ayuu ka tirsanaa shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda, waxaanu markii dambe madax ka noqday Ku-xigeenka Kastanka Cashuuraha ee Kalabaydh. Isaga oo halkaas ka hawlgala ayay isku dhaceen Wasiirkii Maaliyadda Md Cabdicasiis Maxamed Samaale. Weliba dad ka tirsan Wasaaradda ayaa door ka qaatay isku-dhufashada. Intaas kaddib waxa uu waxbarasho u tegay dalka Itoobiya, waxaanu soo diyaariyay shahaadada Masterta. Markaas ayuu banneeyay shaqadii
Wasaaradda Maaliyadda. Waxaanu xeraystay shaqo ay Haayadda Adam Smith ka caawinaysay Wasaaradda Maaliyadda, waanu ku guulaystay.
Qalinkii siciid Maxmuud Gahayr